Ku soo dhawow website-kayaga
Sidaas Maxaad OuBo Chemical
Takhasuska & hufan
Waxaan ku takhasusay soo saarta Polyacrylamide 8 sano tayada ka xoogbadan, iyo qiimaha tartan rasmi ah. kooxda farsamo Our biiraan pre-iibinta, iibka iyo ka dib-iibinta habka inay ku taageeraan in doorashada, imtixaanka wax soo saarka iyo adeegyada iibka kadib. Waxa aannu ku ballanqaadaynaa, kooxda farsamada xirfadeed si ay u caawiyaan aad samayn doorasho sax ah.
kooxda farsamo Our biiraan pre-iibinta, iibka iyo ka dib-iibinta habka inay ku taageeraan in doorashada, imtixaanka wax soo saarka iyo adeegyada iibka kadib. Waxa aannu ku ballanqaadaynaa, kooxda farsamada xirfadeed si ay u caawiyaan aad samayn doorasho sax ah.
Saamaynta Miisaanka Molecular ee Polyacry...
Daaweynta biyaha wasakhda warshadaha, cad...
Cationic polyacrylamide oo loogu talagalay wasakhda wasakhda
Cationic polyacrylamide oo loogu talagalay milixda sare waxay ahayd ...